एसएलसी दिएर रूस गएँ, डाक्टर बनेर फर्किएँ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
एसएलसी दिएर रूस गएँ, डाक्टर बनेर फर्किएँ
डा. अनिल भट्टराई, मुटु रोग विशेषज्ञ	|| 15 January, 2022
पर्वतको पिपलटारीस्थित पुणेश्वर माध्यमिक विद्यालयबाट २०४९ मा एसएलसी दिएँ । पहिलो श्रेणीमा एसएलसी पास हुँदा खुसीको सीमा नै थिएg । पास भएको खबर पाउनेबित्तिकै रसियामा बस्ने डा. दिनेश आचार्य काकाले उतै पढ्न सल्लाह दिनुभयो । उहाँकै सहयोगले रसियन एम्बेसीको कल्चरल सिट कम्पिटिसनबाट २०५० मा रुस गएँ ।
सारातो युनिभर्सिटीमा कक्षा १२ अर्थात् आईएससी जसलाई मेडिकल भाषामा ‘प्रिपेटरी कोर्स’ भनिन्छ । त्यो दुई वर्षको कोर्स पढ्न भर्ना भएँ । यो कोर्स गर्दै एक वर्ष रसियन भाषा नै सिक्न लाग्यो । देश फरक भएकाले खानपिन, कल्चर फरक थियो । त्यताको रहनसहनमा भिज्न एक वर्ष नै लाग्यो ।
घरमा मसालेदर खाना खाएको त्यहाँ उमालेको खाना खाँदा हप्ता दिन जसो समस्या पर्याे । भात खाएको बानी पाउरोटीले पेट के भरिन्थ्यो र ! त्यही बेला सोभियत संघ टुक्रिएको थियो । मासु र पाउरोटी जति पनि पाइने तर चामल पाइँदैन थियो । कतै मार्केटमा चामल पाएमा बोराका बोरा किनेर राख्थ्यौँ । कहिलेकहीँ पाउरोटी मात्र पनि खाइयो ।
शुरुका दिनमा घरको सम्झना धेरै नै आउँथ्यो, तर पछिपछि बानी पर्दै गयो । साथीहरू पनि बन्दै गए, पढाइमा फोकस भइयो । अफ्रिका, पाकिस्तालगायतका साथीहरू थिए, अहिले पनि सम्पर्कमै छन् ।
नेपालमा साना घर, साँघुरो बाटो देखेको रुस जाँदा ठूला भवन, फराकिलो बाटो, रेल देख्दा मख्ख परेको थिएँ । नोभेम्बरमा रुस गएकाले हिउँ परेको पहिलोपटक देख्ने मौका पाएँ । त्यसको सम्झना अहिलेसम्म छ ।
होस्टेलकै बसाइ थियो । पढाइकै लागि देश छोडेर गइएकाले घुमघाम कमै हुन्थ्यो । कलेजमा इमानदार विद्यार्थीमा पर्थें । कलेज नै बंक गरेर घुमिनँ । कलेजको छुट्टी हुँदा कहिलेकाहीँ नजिकैको भोल्गा रिभर घुम्न गइन्थ्यो । यहाँको भजनकीर्तन जस्तै उता डिस्को हुने । शुक्रबार र शनिबार साथीभाइसँग डिस्को गइन्थ्यो । दुई महिना गर्मीको छुट्टी हुँदा काम गर्थें । त्यहीँबाट पकेट खर्च निकाल्थेँ ।
सारातो युनिभर्सिटीमा नै पाँच वर्षको एमबीबीएसको पढाइ पूरा गरेँ । २ वर्ष प्लस र ६ वर्ष एमबीबीएस गरी ८ वर्ष रुसमै बसँे । त्यहाँ बस्दा लाहुरे नै भएँ । ८ वर्षको बसाइमा एकपटक मात्र नेपाल आएँ । आउन–जान टिकेट खर्च धेरै हुने भएकाले आउन सम्भव थिएन । मेरो ब्याचमा ४०–५० जना थिए । जसमध्ये ८ जना नेपाली थिए । एमबीबीएस सकिएपछि नेपाल आएर यहाँ तीन वर्ष काम गरेँ ।
मिनिमल्ली इन्भेसिव कार्डियक सर्जरीका लागि स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया र युके पुगेँ । अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पनि हर्ट सर्जरीको तालिम लिएँ । इटालीको पाडोवा युनिभर्सिटीबाट कार्डियो भास्कुलरबाट पीएचडी गरँे । हाल नेपालमा ९ वर्ष यही क्षेत्रमा कार्यरत छु । महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रन्सपल्ट सेन्टर, ग्रिन सिटी हस्पिटल र नेपाल कार्डियो डाइबेटिज एण्ड थाइरोइड सेन्टरमा आबद्ध छु ।
यो यो पनि